ကိုဗစ်ရောဂါ ပျောက်ကင်းအောင် ကောင်းချီးပေးပြီး ‘မန်းမှုတ်’ ပေးတဲ့ သင်းအုပ်ဆရာ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံး…
ကိုရိုနာ ရောဂါမကူးစက်အောင် ဘုရားသခင်ရဲ့ ကောင်းချီး​ဖြင့် “မန်း” ပေးတဲ့ ကင်မရွန်းနိုင်ငံက သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်သူ အန်ဒီဖာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပဲ ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ခံရပြီး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာများရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ အန်ဒီဖာဟာ သြဇာကြီးတဲ့ သင်းအုပ်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မသေဆုံးခင် တစ်ပတ်ခန့်ကသူ့ရဲ့ လက်နဲ့တပည့်တွေရဲ့ ဦးခေါင်းကိုကိုင်ပြီး ကိုဗစ် […]
အ၀ှါလှန်ပြပီး ရန်တွေ့လိုက်တဲ့ လမ်းမပေါ်က ရန်ပွဲ ရုပ်သံ လူတစ်ခု ပူမှုရယ်တဲ့ ဆယ်ကဋေ ဆိုသလို လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ့်အပူနဲ့ကို မပြေလည်မှု အဆင်မပြေမှု မကျေနပ်မှု ဘ၀င်မကျမှုများ အနည်းအများ ရှိကြသည်သာဖြစ်ပါသည်။ ယခု လမ်းပေါ်က ရန်ပွဲကတော့ အတော့်ကို ကြမ်းလှပါသည်။ ဒီလောက်လူတွေ ၀ို င်းအုံကြည့်နေသည့် […]
ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်ခြင်းသည် စမ်းသပ်သည့်ပုံစံ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်ပုံစံဖြင့် အောင်မြင်မည် မသေချာသေးကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပြောကြား.
ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်ခြင်းသည် စမ်းသပ်သည့်ပုံစံ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်ပုံစံဖြင့် အောင်မြင်မည် မသေချာသေးကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပြောကြား ကျောင်းများပြန်ဖွင့်ခြင်းသည် စမ်းသပ်သည့်ပုံစံ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်ပုံစံဖြင့် အောင်မြင်မည် မသေချာသေးကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။ မတ် ၁၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် […]
အဖိုးက Maskမတပ်ထားတာ တွေ့လို့ Maskသွားပေးရင်း အဖိုးနဲ့ စကားလက်ဆုံ ကြဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ရင်ထဲမကောင်းဘူး
အဖိုးက Maskမတပ်ထားတာ တွေ့လို့ Maskသွားပေးရင်း အဖိုးနဲ့ စကားလက်ဆုံ ကြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။ အဖိုးရဲ့ ဖိနပ်ဆိုင်လေး ပြန်ဖွင့်တာ ၃ ရက်ရှိပါပြီ အဖိုးက Maskမတပ်ထားတာ တွေ့လို့ Maskသွားပေးရင်း အဖိုးနဲ့ စကားလက်ဆုံ ကြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။ အဘိုးဘာလို့ Maskမတပ်တာလဲလို့ မေးလိုက်တော့ အဘိုးက သူရဲ့ဘေးမှာချထားတဲ့ အိမ်တွင်းလုပ် […]
အမျိုးသမီးအင်္ဂါကို မလုပ်သင့်သည့်အရာများ ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးပါသည် သတိထားဆင်ခြင်ကြပါ
(၁) ပြွတ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီး ရေမဆေးရ..၊ တစ်ချို့က Douching Advice (ရေပြွတ်ကဲ့သို့သော)အရာများသုံးပြီး ယောနိအတွင်းပိုင်းကို ထိုးသွင်းကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြပါတယ်။ ပိုးသတ်သန့်စင်ထားကြောင်း ကြေငြာထားရင်လည်း အသုံးပြုဖို့ မသင့်ပါဘူး..။ သားအိမ်အတွင်းပိုင်းဟာအရမ်းနူးညံပြီး pH ပမာဏလွန်ကဲတဲ့ ရေနဲ့ တွေ့ရင် ပျက်ဆီးတတ်သလို အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်..။ (၂) လက်ဖြစ်ဆေးဝါးများ မသုံးရ..၊ […]
Live လွှင့်နေရင်း ရှက်ရှက်ပေါ်သွားတဲ့ နန်းဆုရတီစိုးရဲ့ ဗီဒီယို နာမည်ကြီးနေပြီ
အဆိုတျောသရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ နနျးဆုရတီစိုးကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို ဟိုးအရငျခတျေကတညျးကလုပျဆောငျခဲ့ပွီး ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးခဈြခငျခွငျးတှကေိုရရှိခဲ့ပါတယျ။လကျတလောမှာဆိုရငျတော့ နနျးဆုရဲ့အခဈြရေးနဲ့ပကျသကျပွီး ပရိသတျတှကေအရမျးစိတျဝငျစားနကွေကာ သူမဘကျကနပွေီးတော့ အားပေးစကားတှပွေောပေးကွပါတယျ။ (video အောကျဆုံးမှာပါသညျ) နနျးဆုကလညျး အနုပညာအလုပျတှကေိုဖွညျးဖွညျးမှနျမှနျလေးလုပျဆောငျနပွေီး အေးခမျြးစှာနထေိုငျနတောဖွဈပါတယျနျော။နနျးဆုကတော့ အသကျအရှယျတှေ တဈနှဈထကျတဈနှဈပိုကွီးလာပမေယျ့ သူမရဲ့အလှအပတှကေတော့ ဆယျကြျောသကျအရှယျအတိုငျး နုပြိုလနျးဆနျးပွီး အရုပျမလေးလိုအရမျးခဈြဖို့ကောငျးနတောဖွဈပါတယျ။ နနျးဆုကတော့ မကွာခဏခရီးတှသှေားပွီး စိတျခမျြးသာအောငျနထေိုငျတာကွောငျ့ တဈနတေ့ဈခွားလညျးပိုပိုလှလာပါတယျနျော။အခုဆိုရငျတော့ နူးညံ့ခြိုမွိနျတဲ့အပွုံးခြိုခြိုလေးနဲ့ […]
ခရစ်ယာန် တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လာ၏ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ်ပီ Live
ခရစ်ယာန် တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လာ၏ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ်ပီ Live ခရစ်ယာန် တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လာ၏ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ် Live ရန်ကုန်မြို့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ ဒေဗစ်လားဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ တရားဥပဒေကို မထေမဲ့မြင်ပြုကာ ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ရပ်များကြောင့် လူအများအြ ပား သူ့ဟောပြောပွဲမှတဆင့် ကိုရိုနာရောဂါများ ကူးစက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် […]
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါကွောငျ့ ထိခိုကျခံစားခဲ့ရသညျ့ နိုငျငံမြားကို ဒျေါလာ ၂ ဘီလီယံ ကူညီမညျဟု ရှီကငျြ့ဖငျြ ကတိပွု.
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါကွောငျ့ အကွီးအကယျြ ထိခိုကျခဲ့သညျ့ တခွားသော နိုငျငံမြားကို အကူအညီအဖွဈ ကနျဒျေါလာ ၂ ဘီလီယံ ထောကျပံ့ပေးမညျဟု တရုတျသမ်မတ ရှီကငျြ့ဖငျြက ကတိပွုသှားခဲ့သညျ။ သမ်မတ ရှီသညျ မလေ ၁၈ ရကျက ၇၃ ကွိမျမွောကျ ကမ်ဘာ့ ကနျြးမာရေး ညီလာခံ ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနား၌ […]
မိတ္ထီလာတွင် လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်နေစဉ် ကျောင်းတိုက်အတွင်းမှ ကျော်ဝင်းသန့် ရုပ်သံ
မိတ္ထီလာတွင် လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်နေစဉ် ကျောင်းတိုက်အတွင်းမှ ကျော်ဝင်းသန့် ရုပ်သံ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ သံဃာတော်တစ်ရပ်လုံးနဲ့ စစ်တပ်ကို စော်ကားရေးသားသူ ကျော်ဝင်းသန့်ဆိုသူအား မိတ္ထီလာလူထုကြီးမှ မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ လူစုလူဝေးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျော်ဝင်းသန့်ဖခင်ဖြစ်သူမှ ပထမတောင်းပန်ခဲ့ပီး ကျော်ဝင်းသန့်ဆိုသူမှလည်း တောင်းပန် ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးမှ တောင်းပန်ရုံဖြင့် မကျေနပ်နိုင်သဖြင့် တရားဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် […]
ပြင်သစ်တွင် ကျောင်းများပြန်ဖွင့်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်း ကလေးအယောက် ၇ဝ ကျော် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံ ရ၍ ကျောင်းများပိတ်ပစ်ရ
ပြင်သစ်တွင် ကျောင်းများပြန်ဖွင့်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်း ကလေးအယောက် ၇ဝ ကျော် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံ ရ၍ ကျောင်းများပိတ်ပစ်ရ ယနေ့ မေလ ၁၉ ရက်နေ့ Daily Mail ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် စာသင်ကျောင်းများဖွင့်လှစ်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း မူလတန်းအရွယ် ကျောင်းသားတစ်ဦး COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရမှုကြောင့် စာသင်ကျောင်းများကို […]